TOGETHER WITH YOU(Steembounty) - သင် စေညွှန်းရာ သင်နှင့် အတူ - Week #8 (@aggamun) — Steemit
TOGETHER WITH YOU(Steembounty) - သင် စေညွှန်းရာ သင်နှင့် အတူ - Week #8 (@aggamun)
aggamun (62)in #kryptonia •3years ago
Steembounty ဆိုတာ စတီးမစ် အသုံးပြုသူများကို STEEM များကို ခွဲဝေ ပေးတယ် စနစ် တစ်ခုပါ။ အဲသလို ဖြစ်ဖို့ bounty ပေးထားတဲ့ post အောက်မှာ comment ပေးထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ bounty ကလည်း စိတ်ကြိုက် ပေးလို့ရပါတယ်။ 1 STEEM2STEEM5STEEM စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ အဲ့ bounty ကို post ရဲ့ comment ပေးသူများကို အချိုးကျ ခွဲပေးတာပါ။ comment မှာ upvote များများ ရတဲ့ သူက % အလိုက် STEEM ပိုရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် bounty ပေးသူ post ပိုင်ရှင်ရဲ့ upvote ကို ရသူ က ပို အလေးသာပါတယ်။ အဲဒါ အားလုံး ကို @steem-bounty က post တင်ပြီး ၇ ရက်မြောက်နေ့မှာ auto လုပ် ပေးပါတယ်။ ဒါကျွန်တော် သိသမျှ အကုန်ပါပဲ။ အဲဒါတွေ အားလုံးကို bro @mmunited ပြောပြလို့သိတာပါ။
Posted from my blog with SteemPress : https://aggamun.timeets.com/?p=19
#msu #myanmar #steem-bounty #steempress
3 years ago in #kryptonia by aggamun (62)
@nayhlaingsoe has earned 0.294 STEEM. 0.294 STEEM from the creator of the bounty!
@hnineikhaing has earned 0.294 STEEM. 0.294 STEEM from the creator of the bounty!
@minsoenaing has earned 0.294 STEEM. 0.294 STEEM from the creator of the bounty!
Upvoted and Resteemed and already following!
Thank You @aggamun
please check carefully in kryptonia, do not revoke
@teamcn-shop @automation @cleverbot
Does cleverbot learn.
Are you sure this was not something I asked in the future, you are the 'Timelord' after all?!
minsoenaing (63)3years ago (edited)
esteem apk အသစ်2.0.7ကြောင်း good-karma ရေးထားတာပါ၊ သုံးစရာ တကယ်မ်ုက်တဲ့ feature အသစ်တွေပါလာပါတယ်။ @myintlwinsoe
voted! ဟုတ် တခြား fri တစ်ယောက်ယောက်ကိုလည်း tag တွဲခေါ်ပေးပါဦးနော် ကျေးဇူးပါ။
hnineikhaing (52)3years ago
Steemianတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ။ဖတ်ကြည့်ပါ အကျိုးမယုတ်စေပါဘူး။@honeylay 2001
nayhlaingsoe (55)3years ago
this post is very useful writer [email protected] using partiko @komoekyaw https://steemit.com/blog/@mmunited/15steempower-wz001dcaam
voted! thz u
Congratulations @aggamun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
teamcn-shop (64)3years ago
由 @pizzapai 批萨姐 在晴空万里 跑着步给您送来
Congratulations @aggamun ! You receiveda538517841.96% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 33 SUP Today.